GOOLASHA MARANTA (TRICOLOR) AMA WARSHAD SALAADDA: DARYEELKA GURIGA, SAWIR - SOOSAARKA DALAGGA
Noocyada daryeelka ee loo yaqaan 'tricolor arrow triangolor' (tricolor) ama warshad salaadda
Goolasha Maranta ama Tricolor Caleemaha waa caleemo qallalan oo laga soo qaaday qoyska isla magaca.
Dhaqanka dabiiciga ah ee hoygiisa waa xajmiga roobabka ee Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika.
Muuqaalka cajiibka ah ee caleenta caleenta ah ee caleemaha si uu u samaysto lana kiciyo la'aanta iftiinka aasaasiga ah ee magaciisa labaad - "geedka ducada".
Hoos waxaa ku yaal sawir aad ka heli kartid warshad saddex gees leh ama salaadda ah:
Daaweynta hargabka guriga waa mid aan ka duwaneyn dhirta kale.
Marka aad iibsanayso, waa inaad si taxadar leh u baartaa geedka, ka tagida iibsashada si aad u weyn, qadiim ah ama, si tartiib ah, dhalinyaro, aan weli helin xoog, iyo weliba geedo daciif ah.
Waa muhiim!Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu bilaabo beerashada ubax waa Abriil - Maajo.
Ka dib marka la keeno guriga aqalka, waa in laga ilaaliyaa saameynta waxyeelada leh ee hawada qolka qallalan. Si taas loo dhan yahay, geedka lagu buufin oo ay kala soocaan biyo diirran dhalada kiniiniga dhowr jeer maalintii ilaa ay ka dhigto xaalado cusub oo loogu talagalay.
By habka, dhererka noocan oo kale ah ayaa lagama maarmaan u ah ubaxa muddada dhan xilli ay sii kordheyso: jiilaalka ugu yaraan hal, iyo xagaaga - laba jeer maalintii.
Marka caleemaha la soo saaro, caleemaha qaarkood si xoog leh ayaa loo soo saaraa, markaa waxay u baahan yihiin in laga saaro. Isla mar ahaantaana, hawlgalka ee qaybaha dhirta koryaha ah ee koryaha ah oo keli ah waxay hagaajinaysaa aragtida asteeynteeda, laakiin sidoo kale waxay leedahay saameyn togan oo ku aaddan qaab-dhismeedkiisii ​​hore, tan iyo waxay kicisaa koboca caleemaha cusub dhalinyarada ka soo qayb dhexe ee ubaxa.
Maranta waxay u baahan tahay waraabin badan oo joogto ah, ma ogolaanayo xad-dhaaf xad dhaaf ah ee ciidda. Si kastaba ha noqotee, qoyaanka xad dhaafka ah ee substrate waxay noqon kartaa waxyeello geedka, tanina waxay horseedaysaa duufaanka qoryaha xididka.
Sida caadiga ah waraabinta xagaaga ayaa la sameeyaa maalin kasta, iyo jiilaalka - 1-2 jeer toddobaadkii. Nidaamkan, kaliya roobka, barafka, biyaha tuubada ama biyaha kala go'ay ayaa loo isticmaalaa.
Tilmaamo lagu kalsoonaan karo ee baahida loo qabo waraabinta joogtada ah waa qalajinta lakabka sare ee dhulka si qoto dheer2 cm.
Moobeyaal sidoo kale waxay leedahay saameyn ku leh dhirta, gaar ahaan xagaaga.
Waa muhiim! Xaaladaha qaarkood, nidaamkani wuxuu u horseedi karaa cirifka cad ee caleemaha. Iyada oo lagu beddelanayo qoyan qoyan, meel u dhow fallaadhaha, waxaad ku rakibi kartaa suufka caaga ah ama weelasha kale ee leh dhoobada ama dhoobo dhoobo, ka buuxsamey biyo.
Marka laga beerto dhirta ayaa ugu haboon gacmo gaaban laakiin ballaaran dhoobada dhoobada ama dhejiska. Tan waxaa lagu sharaxay xaqiiqda ah in xididdada fallradani aysan dhex galin ciidda, laakiin abuuro digriiga dhulka hoostiisa ah, oo u baahan meel bannaan oo bilaash ah oo loogu talagalay horumarintooda.
Si ay u koraan dhirta dhirta leh ee qurxinta leh iyo quruxda badan, waxaa habboon in la diyaariyo substrate la isku dheelitirsan oo leh jawi xasaasiyad oo daciif ah.
Sida dambe, qaababka dukaanka diyaarka ah ee loo diyaariyey ama isku dhafan ayaa loo isticmaalaa. Doorashadan soo socotaa ayaa si fiican u xaqiijisay:
2 qaybood oo ah peat;
1 qayb ka mid ah ciid webi aan ahayn;
2 xabbo oo ah humus caleen.
Wuxuu u qalmaa xusuus gaar ah iyo isku dhafan sida guud:
4 xabbo oo cows ah;
1 qayb ka mid ah digirta qudhuntay;
1 qayb ka mid ah ciid webiga.
Si aad u bixiso substrate dheeraad ah jilicsan, waxaad ku dari kartaa jilicsan geed, sphagnum, dhuxul la jajabiyey ama dhulka ba'an. Waxaa intaa dheer, waxay diyaarinayaan dheecaan adigoo ku shubaya lebiska, lebiska jaban ama dhagax la jajabiyey oo leh lakab ilaa 5 cm ilaa hoose ee ubaxa.
Fiidiyowgu wuxuu muujinayaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee daryeelka ubaxa:
Waa muhiim!Dhirta yaryar waa in sannad walba la tallaalaa, iyo marka ay gaaraan da'da saddex sano - 1 mar 2 sano.
Waqtiga ugu habboon ee wax-qabadka noocaas ah ayaa la tixgeliyaa guga. Ka hor inta aanad feedhin, oo la qalajiyey oo la qalajiyey, iyo sidoo kale caleemaha jir ah ayaa la saaraa, si aysan u faragelin qaabka caadiga ah ee caleemaha cusub.
Iyada oo la socda faafinta daaqsinka dhirta, ubax cusub ayaa la heli karaa iyadoo lagu caawinayo abuurka. Si tan loo sameeyo, dambe ayaa lagu beeray substrate si fiican u dillaacay heerkulka 13 - 18 ̊ S taas oo loo baahan yahay in la ilaaliyo xilliga sii kordhaya.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu kori karo warshad.
Kala wareegaya baadiyaha. Xaaladdan oo kale, marka qashin-soo-saarista, gumeysiga hooyada ayaa loo qaybiyaa digriiga gabdhaha leh leh xididdada si wanaagsan loo horumariyay iyo taarikada caleen. Shakhsiyaadka da'da yar waxaa lagu beeray weelal kala duwan oo leh dabacsan, dhulka hoostiisa oo ku daboolan filim caag ah ama dabool caag ah si loogu noolaado si ka sii wanaagsan. Ka dib markaa, dheryihii ayaa la dhigayaa meel kulul oo ah dhirta ugu dambaysa dhirta.
Gooyn. Laga soo bilaabo caleemaha apical qaadan qayb ka mid ah dhererka asliga ah ee 8 - 10 cm leh laba internodes iyo dhowr caleemo caafimaad leh, ka dibna lagu meeleeyay weel biyo leh. Si loo dedejiyo dhismaha xidid, guntooda waxaa lagu daaweeyaa korriin koritaanka. Nidaamka jeermisku wuxuu inta badan qaataa 1 - 1.5 bilood. Taas ka dib, gooyn ah waxaa loo tallaalaa substrate-hawada-hawada lagu rujin karo iyo si fiican u waraabiyey. Wixii aasaasida degdeg ah ee geedo qabanqaabiyo lagu koriyo yar yar.
Heerkulka heerkulka wanaagsan ee lagu beero OPO waa 20 - 26 C xagaaga iyo 16 - 18 C xilliga jiilaalka.
Waa muhiim! Warshadu waxay si aan fiicnayn uga jawaab celineysaa heerkulka iyo heerarka, sidaas darteed laguma talinayo in laga baxo xitaa xilliga kuleylka.
Maranta uma dulqaadanayso qorraxda tooska ah, si kastaba ha ahaatee, shoogga xooggan ayaa si xun u saameeya muuqaalkiisa: lamina hoos u dhac weyn, luminta midabka cagaaran.
Geeduhu waxay dareemaan marka ugu fiican iftiinka iftiinka (penumbra), ama ka yar nalalka iftiinka iftiinka macmacaanka 16 saacadood maalintii.
Waa muhiim! Meesha ugu fiican ee ubaxa gudaha waxay noqon doontaa qaybta dhexe ee qolka, iyo xilliga qaboobaha xayawaanka daaqada, halkaas oo dhirta ay heli doonaan tamar badan oo cadceedda ah.
Noocyada qurxinta ee dhirta waxaa lagu qiimeeyaa ubax growers for a rosette qurux badan ee caleemaha oval, midabada taas oo midabada kala duwan ee cagaaran madaxbannaan, oo ku xiran by turxad ah qaab ah xididdada dhalaalaya, stripes iyo dhibco.
Qof qaraabo dhow ah oo ubax ah - maranta marabase - waxaa loo adeegsadaa karinta. Meesha digriiga dhulka hoostiisa hodan (ilaa 25%) ayaa loo isticmaalaa. Waxay helayaan bur, kaas oo u aadaya diyaarinta nafaqada nafaqada leh, suugada, maraqyada, maraqa iyo alaabta wax lagu dubo.
Noocyada kala duwan ee fallaadhaha ayaa leh bogsiin. Waxaa la aaminsan yahay in dheri leh warshad nool, oo lagu rakibay sariirta, waxay bogsan kartaa hurdo la'aan. Qaar ka mid ah beeralayaha ubaxa hiwaayadda waxay aaminsan yihiin in ay iswaafajiso bedka gudaha gudaha, waxay gacan ka geysaneysaa in ay la qabsadaan niyadda xun iyo weerarada gardarrada, oo xajiya jahwareerka.
Saameyn Cadaadis Dadka ma laha, sababtoo ah ma keento juice caano casaan ah oo aan lahayn hareeraha fiiqan, taasoo keentay in la jarjaro.
Waa muhiim!Si kastaba ha ahaatee, taxaddar waa in la raacaa dadka qaba cudurrada xasaasiyadda daran iyo neefta neefta.
Tani waa mid ka mid ah kuwa ugu badan halis ah cayayaanka dhirta. Waxay ku taallaa dhinaca hoose ee caleen caleen, taasoo keenaysa muuqaalka dhibcaha cad iyo caleemaha dhuuban. Waqti ka dib, caleemaha ayaa lumiya midabkooda caadiga ah waxayna dhacaan.
Si looga hortago dhacdadan, waxaa lagama maarmaan ah in laga fogaado qallajinta xad dhaafka ah ee hawada ee qolka, taasoo soo saarta xilli-xilliyeedka ku buufin biyaha ubaxa. Xaaladda cudurka horay u sii jirey, waxaa loo isticmaali karaa daawooyinka cayilan ee gaarka ah, gaar ahaan "Fitoverm", "Aktal", "Funanon", iwm, iyo sidoo kale pollen by diyaarinta sulfur ee hawada furan ee ka baxsan guriga.
Calaamad u ah burburka cayayaankan waa muuqaalka kore ee brown on caleemaha iyo afkoda. Xayawaanku wuu dillaacaa, laalaabaa, lumiyaa midabkiisa dabeecadda ah iyo inuu hoos u dhaco (wixii faahfaahin ah ee ku saabsan waxa la sameeyo haddii caleemaha jeexan jaale ah oo qalalan, iyo sidoo kale cudurrada iyo cayayaanka ay burburin karaan ubaxa iyo sida loo daweeyo geedka, halkan ka akhriso).
Nidaamka xagjirka ah ee la dagaallanka cudurkan waa in lagu dhaqaa aagagga ay saameeyeen dhirta leh 5% saabuuni saabuun (20 garaam oo saabuun ah oo saabuun ah 10 litir oo biyo ah) ama lagu buufin karo xalka Actellica oo lagu diyaariyey heerka 1 illaa 2 ml oo ah badeecada halkii litir oo biyo ah.
Waxay ku dhuftey caleemaha caleenta ah. Waayo, baabba'addeedu waxay isticmaashaa daawooyinka la midka ah sida kiiska gabbaad. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, daaweynta waxaa loo sameeyaa si isdabajoog ah ilaa laga gaaro natiijo xasiloon.
Goolasha Maranta - maaha warshad sahlan, sababtoo ah koritaanka caadiga ah iyo horumarkeeda waxay u baahan tahay in si adag loo raaco beerashada beeraha. Si kastaba ha noqotee, dadaalladan oo dhan waxay u bixin doonaan si taxadar leh, maxaa yeelay "cawska oo tukanaya" waa mid ka mid ah dhirta kulaylaha ugu quruxda badan ee quruxda leh ee isha ku haya caleemo qulub leh oo leh qaab gaar ah sanadaha.